Ciidamadi Kenya ee ku go!doonsana Bulo-guduud oo xal loo helay |
Ciidamadi Kenya ee ku go!doonsana Bulo-guduud oo xal loo helay
Gold Vigra buy online, purchase lioresal. Saraakiisha Maamulka KMG ee Jubba, ayaa waxa ay shaaciyeen in la xaliyay khilaafkii udhaxeeyay ciidamada Amisom ee ku sugan Gobolada Jubbooyinka, xilli ciidanka Sierra Leone oo howlgalka Amisom qeybta ka ah ay dhawaan diideen inay sahay gaarsiiyaan ciidamada Buulo gaduud ku go’doonsan ee Kenyatiga.
Maxamed Cabdi Buule Sugale oo kamid ah saraakiisha ciidamada Maamulka KMG ee Jubba, ayaa Warbaahinta u sheegay in xal buuxa laga gaaray khilaafkii udhaxeeyay ciidamada Amisom, iminkana howlgalka uu si caadi ah ku socdo.
Mr.Buule ayaa xusay in guulo weyn laga gaaray khilaafaadkii u dhaxeeyay ciidamada ka howlgala deegaanada Jubbooyinka, ayna ku guuleysteen inay si wadajir ah u qabsadaan deegaano Al-Shabaab ay ku sugnaayeen oo Jubbooyinka ka tirsan.
Intii khilaafka uu jiray ayuu sheegay inay arkeyn in dib u dhac badan uu ku imaanayay howlgalada la doonayo in deegaanadaasi looga saaro Al-Shabaab, balse hada si wanaagsan loo xaliyay khilaafkaasi.
Ciidamada Kenyatiga iyo kuwa Jubba ee ku sugan deegaanka Buulo gaduud ee Gobolka Jubbada hoose, ayaa waxaa go’doomiyay ciidamada Ururka Al Shabaab, taasi oo keentay in ciidamada Sierra Leon lagu amray inay qaadaan sahay ciidanka ay u geeyaan, balse waa ay ka biyo diideen arintaasi, waxa ayna taasi keentay khilaaf ka dhasha howlgalka.
Sidoo kale Maxmaed Cabdi Buule, ayaa sheegay inay qorsheynayaan in Al-Shabaab ay ka saaraan guud ahaan deegaanada ay Jubbooyinka kaga sugan yihiin.
Sarkaalka ayaa sidoo kale qiray in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uusan sahlaneyn in dhaqso lagu dhameeyo laakiin ay dajiyeen qorshaha ay kaga saari karaan guud ahaan deegaanada Jubbooyinka.